Yiba ne-bachelor ithisisi ebhalwe ngobuchule ngoochwephesha abaziingcali
Umsebenzi weqela ocaphukisayo izolo! Masilungiselele iprojekthi kunye nomsebenzi weqela. Sinceda kuphando, imikhombandlela, umxholo, imiboniso okanye ukubonelela ngempahla epheleleyo.
Umsebenzi weprojekthi - zibhalele	okanye	Masibhale
Umsebenzi weprojekthi ngexesha lekhosi kufuneka wenziwe ngeendlela ngeendlela. Akukho zifundo zizodwa zomsebenzi weprojekthi. Olu hlobo lomsebenzi wasekhaya lubeka iimfuno ezizodwa kubafundi. Kwelinye icala, kungokusebenza kwiqela. Kwelinye icala, umsebenzi weprojekthi ubonakalisa ukuba abafundi bafundile ukusebenzisa imigaqo-nkqubo yesayensi. Umsebenzi ozimeleyo uyafuneka kwaye isayensi ihanjiswa kwiqela. Umsebenzi weprojekthi ke wenziwa ngokwamanqanaba ahlukeneyo. Ngokuchasene nomsebenzi wasekhaya wesicatshulwa, iingcinga ezahlukeneyo kunye nezisombululo ezinokubakho zixutyushwa kwiqela. Kwingxoxo, ke, izinto ezintsha zithathelwa ingqalelo ezinokuthi zingakhange zithathelwe ingqalelo njengomsebenzi ozimeleyo weqela. Oku kwenza ukuba umsebenzi weprojekthi ubenomdla kuye wonke umntu obandakanyekayo, kodwa ufuna isahlulo esifanelekileyo sokusebenzisana kumalungu eqela. Umsebenzi weqela ngumsebenzi wentsebenziswano hayi ukuphunyezwa kwezimvo zakho ngokuchasene nokuchasana kwiqela.
Nangona kunjalo, ukukwazi ukusebenza kwiqela akuthethi ukuzithoba kwamanye amalungu eqela. Iqela lihlala kwimpixano nasekugxekweni. Unxibelelwano ngaphakathi kweqela ke yinto ebaluleke kakhulu. Unxibelelwano kuthetha ukutshintshiselana ngolwazi kunye neempawu. Nangona kunjalo, unxibelelwano lungaphezulu kwelizwi elithethiweyo. Isakhono kunye nokukwazi ukunxibelelana ngolwimi koko kwahlula umntu kubo bonke abaphilayo kwiplanethi yomhlaba. Izilwanyana nazo zinethuba lokunxibelelana. Kodwa oku kwenzeka ikakhulu kwindawo engathethiyo. Unxibelelwano alungaphezulu kolwimi. Intsimi ebanzi yamathuba angenakuthetha abandakanya izijekulo, ithoni yelizwi, kunye nokujonga ngelixa uthetha. Ngapha koko, unxibelelwano ngomlomo yi-10% kuphela yento esiyibonayo. Uninzi lolwazi ludluliswa ngaphandle kokuthetha. Inzululwazi yezonxibelelwano itsale ingqalelo kulwaziso apho kugcinwa khona ulwazi kwimemori yethu: yi-10% kuphela yezinto ezifundwayo ezenziwa kwimemori. Ubuninzi be-20% yomnxeba iyagcinwa. Uninzi lolwazi-i-70% eseleyo-idluliswa ngemiqondiso engengomlomo.
NgokukaLencioni, iZinto eziHlanu eziSebenzayo zeQela (2002), kukho izinto ezintlanu ezibalulekileyo ezingabalulekanga ekusebenzeni kwiqela.
Kwelinye icala, kukho iikhrayitheriya ezibonakalisa ukusebenzisana. Amalungu eqela anomdla omkhulu kwiziphumo ezinokufezekiswa ngexesha elithile. Uxanduva kwiqela kunye neqela lubeka umdla wakho wobuqu ngasemva. Umanyano olusiphumo lubakho rhoqo kwingxelo entle. Imveliso yeqela iza kuqala. Ukuphuhliswa ngokudibeneyo kwezisombululo zesayensi kubangelwa kukunyamezelana kwezimvo ezahlukeneyo.
Uncedo lobungcali ngomsebenzi weprojekthi
Njengawo nawuphi na umsebenzi wesayensi, umsebenzi weprojekthi ubandakanya uphando oluninzi kunye nokubhalwa kweziphumo (ezithile). Ngexesha lokufunda kwakho akufuneki ujongane nomsebenzi weprojekthi okhoyo ngoku. Kuya kufuneka ulungiselele iimviwo kunye neminye imisebenzi yasekhaya ngaxeshanye. Uphelelwa lixesha ukuze kungabikho nto inokwenzeka yokubhala umsebenzi weprojekthi ngexesha elibekiweyo. Kule meko, kuya kufuneka ubhenele kuncedo lwearhente yethu yokubhala. Ababhali bethu bavela kuyo yonke imisebenzi yezemfundo kunye needigri zaseyunivesithi ezihambelanayo. Ke ngoko ayisiyongxaki inkulu kuthi ukuba silawule umbhali ofanele wena nomsebenzi wakho.
Ukunikezela umsebenzi weprojekthi komnye wababhali bethu ke ngoko ngumsebenzi wezomthetho. Uthatha umntu obhala ngesiporho kwiprojekthi yakho. Ukutshintshiselana okunomdla phakathi kwakho nathi okanye umbhali wethu kuya kukunika ulwazi olutsha onokuthi uxoxe ngalo kwingxoxo yeqela.
Ingxelo ebhaliweyo yenxalenye yakho kwiprojekthi sisiseko sovavanyo olulandelayo. Kubaluleke kakhulu ke ngoko ukufikelela kwinqanaba lokugqibela elifanelekileyo. Ukuthobela iikhrayitheriya zomsebenzi wobunzululwazi kuqinisekiswe ngumsebenzi wethu. Phambi kokuba iziphumo zokugqibela ezibhaliweyo zenxalenye yakho yeprojekthi zithunyelwe kuwe, umsebenzi uya ngokwamanqanaba ahlukeneyo olawulo lomgangatho kwinkampani yethu. Oku kubandakanya ukukhangela ukukopela, okwenziwa ngokwamanqanaba amathathu. Isigaba sokuqala kukuvavanywa komsebenzi ngesoftware yokukopa, njengoko isetyenziswa ngoku kwiiyunivesithi nakwiikholeji. Sisebenzisa iinkqubo ezininzi ezizimeleyo zesoftware. Ukuba kukho ingxelo malunga nokukopa, umbhali wesiporho uya kwaziswa ngesicelo sokutshintsha iindawo ezifanelekileyo kwisicatshulwa.
Inyathelo lesibini libandakanya uviwo ngumphathi wethu osemgangathweni. Itshekhi yenziwa ngesandla ngokujonga isicatshulwa esikwi-Intanethi.
Inyathelo lesithathu kukujonga ukuba isicatshulwa silungile na. Zonke iikowuteshini ziyajongwa kwaye zitshekishwe ngokuchanekileyo.
Umsebenzi ke ujongwa ukuba uyithobele ngokuchanekileyo na imigaqo emiselweyo. Ukuhlelwa kubandakanya ukuhlela isicatshulwa
Ukudityaniswa kwezithethantonye ukuthintela ukuphindwaphindwa kwamagama
ulwakhiwo olusengqiqweni lomsebenzi kunye
ukujonga ukuchaneka kweengxelo ezenziweyo.
Ukuhlelwa kobungcali kuya kuguqula isicatshulwa sakho senzululwazi sibe kwiklasi yokuqala.
"Bendinganqweneli umsebenzi weprojekthi ongcono!"
Isidanga kwiZifundo zeNkcubeko
Umhla wokugqibela wokungeniswa kwakho usondele, kusafuneka ufunde kwaye wazi malunga neemviwo zaseyunivesithi ezizayo Iingxaki zexesha ayikwazi kuqhubeka? Ulwakhiwo lwentsebenzo ikwathwala isiqhamo esincinci kwaye kujike kube ngamava aphazamisayo.
Akukho ngxaki, silapha ukunceda! Unathi ufumana uncedo lobungcali ukusuka kumava kunye Umbhali wesiporho onobuchule, nokuba ngowuphi umxholo! Ababhali bethu abanesiporho banesishwankathelo esibanzi kwaye esisexesheni soncwadi kwicandelo labo, baqhelene kakhulu nesigama esifanelekileyo kwaye bayayazi indlela yokusebenzisa iindlela ezithile zesifundo ngokuchanekileyo ukuphucula eyakho Umsebenzi weprojekthi ukugqiba ngempumelelo. Iqela lethu ecaleni kwakho, ungafundela iimviwo ezizayo kwaye akusekho mfuneko yakuzixhalabisa ngomsebenzi wakho wesayensi Umsebenzi weprojekthi yenza ngaphandle koxinzelelo lweqela.